Home » Resort News » Kitiho ny kapa ataonao ary mandehana mankany amin'ny kapa - any Karaiba
Mandehana any Karaiba ary mijanona ao amin'ny toeram-pivarotana sandal Sandals izay tafiditra ao anatin'izany rehetra izany dia mety tsy te hanana fonosana toy ny kapa fotsiny ianao.
Rehefa mikasa ny hiala amin'ny masoandro ny mpandeha dia tonga ao an-tsaina avy hatrany i Karaiba. Miaraka amin'ny tsio-drivotra tropikaly mafana sy rano madio mangarahara, nosy toa an'i Jamaika, Bahamas, Antigua & Barbuda, ary maro hafa no manolotra izay irin'ny vatana, saina ary fanahy. Ary mba hahamora kokoa ny fandehanana, ny Sandals Resorts dia manintona kokoa azy fonosana ny kapanao miaraka amin'ny tolotra izay tsara loatra ka tsy hita.
Alina 1 maimaim-poana amin'ny sokajy efitrano voafantina
Hatramin'ny $ 1000 ny famandrihana
Mihena hatramin'ny 65% ​​ny tahan'ny rakotra
Ary miaraka amin'ny Sandals, ny fijanonana dia misy idiran'ny rehetra, noho izany tsy ilaina ny manahy momba ny fitaterana mankany sy avy amin'ny toeram-pialofana, fisakafoanana na foto-tsakafo, satria efa voakarakara daholo izany. Manomboka amin'ny fotoana ahatongavan'ny vahiny ao amin'ny tobin'ny seranam-piaramanidina Sandals dia hahatsapa ho voaro izy ireo ary hankafy fialan-tsasatra tsy misy ahiahy.
Anisan'ny traikefa nahafinaritra kintana dimy, ny vahiny Sandals dia tsy avela hikarakara irery any amin'ny seranam-piaramanidina feno olona. Ny mpitsidika rehetra dia omena fidirana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny manokana natokana ho an'ny vahiny Sandals sy Beaches ihany. Rehefa miditra dia homena mpanadio tanana, saron-tava sy fonon-tànana maimaimpoana ary zava-pisotro mangatsiatsiaka amin'ny toerana mahafinaritra ny vahiny.
Ny sandal dia mampiasa famindrana manokana ho an'ny vahiny ihany ary nampihena ny isan'ireo vahiny ampitaina amin'ny karazana fiara rehetra mba hiantohana ny halaviran'ny fiaraha-monina. Ho fanampin'izay, ny mpamily rehetra dia samy hisaron-tava sy fonon-tànana ary homena mpanadio ho ampiasain'ny vahiny tsirairay avy. Hodiovina indray koa ny fiara aorian'ny dia rehetra.
Fanamarinana ny mari-pana amin'ny fisorohana amin'ny fisavana:
Hamarina ny mari-pana ho an'ny vahiny amin'ny fahatongavany any amin'ny toeram-pivarotana ho fepetra fitandremana. Ny mari-pana mihoatra ny 99.5F / 37.5C ​​dia ho raisina ivelan'ny sakany. Ny fanamarinana mari-pana fanampiny dia azo atao amin'ny fangatahan'ny vahiny na toro-hevitra amin'ny mpitsabo mpanampy miasa mandritra ny fotoana maharitra.
Fomba fanavahana lavitra
Ny kapa dia hatrizay momba ny tantaram-pitiavana, ary midika izany fa manan-toerana ny vahiny hahatsapa fa izy roa ihany, miaraka irery. Maro amin'ireo trano fisakafoanana no misokatra eny ivelany ary mitondra rivotra madio avy any amin'ny ranomasina. Ary ankehitriny dia misy fomba vaovao hampirisihana ny vahiny hijanonana amin'ny fandriam-pahalemana ara-tsosialy azo antoka na dia mbola manome traikefa miala sasatra aza.
Ireo trano fandraisam-bahiny dia natsangana tamin'ny tobin'ny mpitsabo mpanampy isan'andro miaraka amin'ny mpitsabo mpanampy voasoratra anarana ary mpiasan'ny fitsaboana 24/7, saingy nohavaozin'izy ireo ireo fotodrafitrasa ireo mba hahitana ireo fitaovana sy kojakoja ilaina ilaina hiatrehana ny paikady vaovao.
Ny Protocol Platinum an'ny fahadiovana
Ny Sandals Platinum Protocol of Cleanness dia misy fepetra takiana amin'ny fahasalamana sy ny fiadanam-po amin'ny lafiny fifandraisana rehetra amin'ny toeram-pivarotana rehetra, ao anatin'izany ny faritra iraisana, ny trano fisakafoanana sy lakozia rehetra, fisotroana, efitrano fandraisam-bahiny, hetsika, foibe fanatanjahan-tena, spa, ary ahitàna ireo ambadika rehetra. fandidiana. Sandals Eighteen Touch Point Practice dia fanadihadihana lalina momba ny teboka rehetra ifandraisan'ny mpitsidika manerana ny toeram-pialan-tsasatra ahafahany mifantoka amin'ny fomba fanao amin'ny fidiovana mivoatra mihoatra ny valo ambin'ny folo teboka fanalahidy lehibe ao amin'ny efitrano fidiovana sy fandroana miaraka amin'ny rafitra fanadiovana telo-maso.
Noho izany, mitandrema am-pitokisana, makà varotra, ary mandehana mankany amin'ny paradisa… ary tsarovy ny manangona ny kapa ataonao!
Nampangain'ny MGM Resorts ny saram-pandraharahana hosoka